Côte d’Ivoire : Voampanga Ho Nanao Heloka An’Ady i Charles Blé Goudé · Global Voices teny Malagasy
Côte d'Ivoire : Voampanga Ho Nanao Heloka An'Ady i Charles Blé Goudé	Voadika ny 05 Febroary 2013 7:32 GMT
Zarao: Taorian'ny fisamborana azy tany Ganà, Charles Blé Goudé, ilay antsoina hoe ny jeneralin'ny làlambe sady havana akaikin'ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo, dia voaheloka tamin'ny 21 Janoary noho ny heloka an'ady vitany. Efa nomelohin'ny Firenena Mikambana i Goudé noho “ireo fanambaràna matetika am-pahi-bemaso mikasika ny herisetra miseho amin'ny foto-drafitr'asa sy ny mpiasan'ny Firenena Mikambana ary ireo vahiny” nandritra ny hetsika tamin'ny 2004. Heverin'ny mpisolovava azy, Me Kaufman, fa tsy nanara-dàlana ny fampodiana azy avy any Ganà ho any Côte d'Ivoire.
Nampikoriana ranomainty ( na “kilo-octets” no marimarina kokoa) tao amin'ny tontolon'ny bilaogy ivoarianina io fisamborana azy io satria tao anatin'ny fotoana fanandratana ny fampihavanam-pirenena any Côte d'Ivoire no nisehoany.
Dikasarin'ny fisamborana an'i Charles Blé Goudé – lahatsarin'i Grigri international
Fisamborana izay nampiteniteny Nanaitra ny olona ny fisamborana an'i Charles Blé Goudé, minisitry ny tanora teo aloha sy mpitarika ny Tanora Tia Tanindrazana. Noho ny fahafantarana io fisamborana azy ny 17 Janoary io, dia nirehitra ny tontolon'ny bilaogy ivoariana. Maherin'ny 1750 ny fanambaràna niseho tao amin'ny twitter nandritra iny tontolo andro iny araka ny tranonkala Topsy. Ireo karazan-kevitra navoaka momba an'i Blé Goudé dia taratry ny firehan'ny fiaraha-monina ivoarianina sy mampisongadina ny filàna ezaka mitohy hisian'ny fampihavanana marina taorian'ny olana lehibe izay mbola mamela takaitra sy ireo lonilony goavana.
Faly tamin'iny fisamborana tsy nampoizina iny ny sasany, toa an-dry Roch Tieh :
Tena vaovao tsara io ao anatin'izao tontolon'ny fifanenjanana misy ao Mali sy Alzeria izao. Tsy maintsy fantatry ny mahery fihetsika fa tsy azy ireo ny teny farany.
Tamim-pahatoniana no namalian'ny sasany iny fisamborana azy iny, toa an-dry Blé Félix :
Manantena aho fa ho ara-drariny sy araka ny tokony ho izy no hitsaràna azy. Ary rahoviana ny fisamborana ny avy amin'ny ankilany ? Satria nisy heloka sy fandrobàna ihany koa nataon-dry zareo. Sa atahorana ny manatsofa ny sampan-kazo izay ipetrahan'ny tena noho ny tahotra sao hiara-midoboka ?
Farany, ireo mpomba azy dia mihevitra fa voaheloka tsy ara-dalàna i Charles Blé Goudé, tahaka izany i Infodabidjan:
Ny hany heloka vitan'ny mpitarika ny tontolon'ny tia tanindrazana dia ny nisafidianany ny hiaro ny fireneny sy ny tanibe misy azy hatramin'ny fahazazany, tsy nandoto tena, nefa etsy ankilany misy antokonà tanora miaro ny tombon-tsoan'ireo mpangoron-karena tandrefana, fa tsy nampaninona azy izany.
Charles Blé Goudé, mpitarika ny Fikambanan'ny Mpianatra amin'ny Ambaratonga Ambony any Côte d'Ivoire (FESCI) sy mpiara-miasa amin'ny FPI nandritra ny fihaonam-be tany Marcory, Abidjan, tamin'ny faran'ny 2010. Sary avy amin'i Stephane Meisel tao amin'ny tranonkala Demotix.com
Inona no azo andrasana amin'ny fitsarana an'i Charles Blé Goudé ?
Mbola mino ireo mpomba azy sasany fa mbola handresy izy ireo raha mihetsika. Soratan'i Balie TOPLA ao amin'ny la Dêpeche d'Abidjan araka izay heviny izay izany :
Ho ahy, lavo ny anay anankiray, voazeran'ny tsy fandeferana ilay mpiady ho an'ny fahafahana. Izany no antony, miaraka amin'ireo hafa manerana ny tany, hitazonako hatramin'ny farany ny anjarako amin'ny fiarovana azy sy ho amin'ny fanafahana azy. Manasa anareo aho mba hamonjy ilay hetsika lehibe izay atao mba tsy ho irery i Blé Goudé manoloana ny fahavalo.
Efa fantatry ny be sy ny maro ny zavatra iampangana an'i Charles Blé Goudé . Tao anatin'ny olana ivoariana tamin'ny desambra 2010, izao no nambaran'i Charles Blé Goudé :
“Manomana famonoana olona any Côte d'Ivoire i Sarkozy sy ny ONU “
“Manana iraka miafina ambanin'ny tany ny ONU, tian'izy ireo esorina eo amin'ny fitondrana i Gbagbo (…) Tsy maintsy mamono olona betsaka ianareo.”
Tsy haha afa-bela azy mandritra ny fitsarana ireo famporisihina hanao herisetra amin'ireo mpanohitra azy ara-politika sy ny ONU izay nanenjehana azy.
Nampahatsiahivin'ny vondrona Human Rights Watch fa tafiditra ao anatin'ilay famonoana Ivoarianina sy afrikana tandrefana mpila ravinahitra an-jatony maro ny tanora tia tanindrazana hatramin'ny niandohan'ny ady.
Na izany aza, nanontany tena ny Allain Jules raha toa ka hitondra zava-tsoa amin'ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena io fisamborana io.
Voatazon'ny mpitandro filaminana ao amin'ny sampan-draharaha misahana ny fanadihadiana ara-pitsaràna efa misokatra ho azy any Côte d'Ivoire i Charles Blé Goudé » hoy ireo manampahefana. Eny. Nefa raha te-hikatsaka ny fandriampahalemana marina, dia tsy maintsy ajanona ny fanenjehana ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Ny fitsaràn'ny mpandresy dia tsy mpanolotsaina tsara mihitsy, ny valifaty ihany koa…
Afrika MaintyCote d'IvoireGhana
Ady & FifandiranaFanoheranaFifandraisana iraisam-pirenenaFitantanam-pitondranaLalànaMediam-bahoakaPolitikaZon'olombelona